Kambani yedu inovhara nzvimbo inosvika miriyoni miriyoni masikweya mita, isu tine zviuru zana m3/gore kugona kwefenicha plywood, 300,000 m3/gore kugona DIFFENBACHER inoramba ichitsikirira mutsara uye anopfuura makumi mashanu ekucheka michina yekucheka.
Zvigadzirwa zvedu zvakapfuura iso9001, ISO 4001, CARB certification, uye zvine anopfuura makumi maviri patents. Kune vanopfuura 1,200 nyanzvi uye tekinoroji vashandi, uye vanopfuura makumi matanhatu einjiniya nevashandi vehunyanzvi.
Kambani yedu yanga iri muhuni-based panel indasitiri kweanopfuura makore makumi maviri uye ine sango nzvimbo ye3 miriyoni square metres. Kupiwa kwezvinhu zvakasvibirira zvakanyanya kugadzikana uye kuvimbiswa kwehutano.
20 makore kugadzirwa ruzivo China manufactur...
Wholesale Commercial yakachipa Mvura isingapindi mvura ...
Nyanzvi vanogadzira huni Yakachipa uye yakanaka ...
4x8x1-35mm okoume/poplar/sapele akatarisana Quality a...
Zvigadzirwa zvine zvitupa zve ISO 9001, ISO 4001 uye CARB. Iye zvino tinovhara nzvimbo ye 1.2 miriyoni square metres, 1200 vashandi vehunyanzvi uye vanopfuura makumi matanhatu mainjiniya.
Guangxi Hengxian Yige Wood Co., Ltd iri munzvimbo yemazuva ano Forestry Industrial park, Hengxian County, Guangxi Province, China. Mupaki yeindasitiri, isu tine fekitori yeplywood ine mitsetse mitanhatu yekugadzira uye 60,000 m3/gore kugona kwefenicha plywood; imwe 300,000 m3/ gore simba DIFFENBACHER inoenderera mberi yekutsikisa mutsara inogona kuburitsa particleboard, OSB uye yakanaka yepamusoro OSB; uye anopfuura makumi mashanu ekucheka michina yerotary inopa yemhando yepamusoro yakaomeswa veneer mune akawanda akasiyana saizi.
workshop technical training Muna Gumiguru 2021
Musiyano pakati pe density board uye particle board